Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Ndakpọ olileanya -> Ndụ
Ndụ: [Ndakpọ olileanya]
Na Judas nwanne Jemes, na Judas Isikariọt, nwoke ahụ mesịrị rara Jisọs nye nꞌaka ndị gburu ya.
 Ihe ọ bụla unu na-eme, werenụ obi unu nile mee ya. Ka ọ dị ka ọ bụ Chineke ka unu na-arụrụ ya, ọ bụghị dị ka unu na-arụrụ ya mmadụ. Chetanụ nke ọma na unu nwere ụgwọ ọrụ nke Chineke kwadobere inye unu, ndị ya. Nꞌihi na ọ bụ Kraịst ka unu na-ejere ozi. Onye ọ bụla na-eme ihe ọjọọ ga-anata ụgwọ ọrụ nꞌihi ihe ọjọọ nile o mere. Nꞌihi na Chineke anaghị ele mmadụ anya nꞌihu mgbe ọ na-ekpe ikpe ya.
Ọ bụ ihe siri ike mmadụ ime ihe ga-atọ Chineke ụtọ ma ọ bụrụ na onye ahụ enweghị okwukwe. Nꞌihi na onye na-abịakwute Chineke nso aghaghị inwe okwukwe na Chineke dị. Na ọ bụkwa onye na-akwụghachi onye ọ bụla na-achọ ya.